ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး Laptop (၁၀) မျိုး
လူအများသည် laptop ကို အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ စာသင်ကြားလေ့လာခြင်းနှင့် အားလပ်ချိန်များ ဖြုန်းတီးခြင်းတို့ အပါအဝင် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ Laptop များကို အလွယ်တကူ သယ်ဆောင် သွားနိုင်ပြီး မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် လူအများက နှစ်သက်ကြသည်။ Laptop များကို တန်ဖိုး အမျိုးမျိုးနှင့် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အမျိုးအစား များဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်သည်။ Feature ပိုမိုပါဝင်သည့် Laptop သည် တန်ဖိုး ပိုမိုကြီးမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးကြီးမြင့်သည့် laptop များတွင် ဆန်းသစ်သည့် feature များ ပါဝင်သလို ထူးခြားပြီး တန်ဖိုးရှိသည့် material များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားကြသည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် တန်ဖိုးရှိသည့် စိန်များဖြင့် စီခြယ်ထားသော laptop များသည် ဈေးပိုကြီးမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး laptop (၁၀) မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၁ သန်း
ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန် Luvaglio laptop သည် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး laptop ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုလိုသည့် material, specification နှင့် ဒီဇိုင်းကို အလိုရှိသလို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Power ခလုတ်တွင် ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးကြီးမားသည့် စိန်ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် အခြားသူများမှ laptop အသုံးပြုခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် လက်ဗွေဖတ်စနစ် ပါဝင်သည်။
2. Tulip E-Go Diamond Notebook
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၃၅၅,၀၀၀
ရွှေဖြူနှင့် စိန်များကို အသုံးပြုကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး laptop ဖြစ်သည်။ DVD burner, webcam, 12-antiglare display screen, 2GB RAM, Bluetooth 2.0 နှင့် 160GB hard disk တို့ပါဝင်သည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀
လှပသည့် အသွင်အပြင်၊ မြင့်မားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သည့် display အပြင် Bluetooth, Wi-Fi, webcam ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် တန်ဖိုးကြီးlaptop တစ်ခု ဖြစ်သည်။
4. Voodoo Envy H171
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၈,၅၀၀
နှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်း ၂၄မျိုးကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ 1.3 megapixel ကင်မရာနှင့် 4GB RAM အပြင် ၁၇ လက်မ screen, dual hard disk နှင့် Twin NVIDIA graphics chipset တို့ ပါဝင်သည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀
Apple က ထုတ်လုပ်သည့် laptop သည် အသွင်အပြင် လှပသလို ထူးခြားသည့် feature များပါဝင်သည်။ SoftTouch ဟု လူသိများသော ထူးခြားဆန်း သစ်သည့် နည်းပညာ ပါဝင်သည်။ 256GB SSD နှင့် 8GB RAM တို့ကိုအသုံးပြုထားသည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၅,၅၀၀
Rock Xtreme SL8 သည် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး laptop တစ်လုံးဖြစ်ရုံသာမက စွမ်းဆောင်ရည်လျင်မြန်သည့် laptop တစ်လုံးလည်း ဖြစ်သည်။ IntelCore 2-Quad processor နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် RAM တို့ ပါဝင်သည်။
7. Alienware area 51 m15x
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀
ခေတ်မီဆန်းပြားပြီး လျင်မြန်သည့် laptop တစ်လုံးကို ရှာဖွေ နေသူများအနေဖြင့် Alienware area 51 m5x ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Intel Core-2 extreme နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် RAM တို့ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် လျင်မြန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂိမ်း ကစားရာတွင်လည်း ယခင်က မခံစားဖူးသည့် အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၄,၅၀၀
အကောင်းဆုံးနှင့် နာမည် အကျော်ကြားဆုံး laptop များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Quad-core processor နှင့် 4GB RAM ပါဝင်သည်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၃,၀၀၀
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် laptop တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Intel Q43 chipset, e-SATA interface နှင့် 1TB သိုလှောင်မှုပမာဏ ပါဝင်သည်။ ဗီဒီယို တည်းဖြတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Acer Ferrari 1100 ကို ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ကိုယ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပေါ့ပါးပြီး စင်းရာခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 1280 x 800-pixel resolution ဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်သောကြောင့် ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းတို့ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ 8-X DVD buner, 1.3 pixels webcam နှင့် 4GB RAM ပါဝင်သည်။